महिनावारी कहिले छिटो कहिले ढिलो किन हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ? हेर्नुहोस - Mitho Khabar
महिनावारी कहिले छिटो कहिले ढिलो किन हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ? हेर्नुहोस
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on महिनावारी कहिले छिटो कहिले ढिलो किन हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ? हेर्नुहोस
महि’नावारी कि’शोरी अवस्थामा सुरु हुन्छ । प्रायः ११ देखि १४ वर्षमा महि’नावारी सुरु हुन्छ । प्रथम पटक महि’नावारी भइसकेपछि महि’नावारी अनियमित हुन्छ ।
महि’नावारी हुने इन्टरभल (समयावधि) ३ देखि ५ हप्ता हो । औसतमा ४ हप्ता वा महिना–महिनामा हुने हुनाले नै मिन्सु’रेन्सलाई महि’नावारी भन्ने गरिएको हो । यदि ५ हप्ताभन्दा पनि बढी समयमा मात्रै महि’नावारी भयो भने त्यसलाई ढिलो वा अनियमित भनिन्छ । म’हिनावारी नियमित र अनियमित दुबै हुन्छ ।
इन्टरभल त्यति धेरै फरक परेन भने नियमित भनिन्छ । तर कहिले धेरै छिटो त कहिले धेरै ढिलो अथवा लगातार र’क्तश्रा’व हुनुलाई अनियमित भनिन्छ । महि’नावारी सुरुदेखि बन्द नहुने अवधि प्रजनन् अवधि हो । सुरुको महि’नावारीलाई रजस्वला (मेनार्की) भनिन्छ भने अन्तिम वा बन्द भएको महि’नावारीलाई रजनोवृत्ति (मेनोपज) भनिन्छ ।
महि’नावारी भइसकेपछि पनि अनियमित हुन्छ । छिटोढिलो हुनु भनेको मेच्युरिटी नभएर हो । कसै कसैको पहिलो पटक भएर २/४ वर्ष नै हुँदैन, त्यसपछि फेरि हुन्छ । त्यो सामान्य हो, त्यसले केही असर गर्दैन । तर धेरै वर्षसम्म नै भएन भने पछि बच्चा नहुने हुन्छ, त्यसैले चिकित्सकलाई देखाउन जरुरी छ ।
महिनावारी घटबढ हुँदा औषधि खानुहुँदैन । औषधिले झन् समस्या ल्याउँछ, असर गर्छ । औषधि दिनेलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । औषधि (ह’र्मन) दिने हो कति मात्रा, कति समय खाने भन्ने थाहा नहुँदा वा तरिका नजानेर पनि महिनावारी घटबढ हुन्छ । विभिन्न महिलाहरुले श्रीमान विदेश गएपछि परिवार नि’योजनको साधन चक्की औषधि सेवन गर्न छोड्छन्, त्यसले समस्या ल्याउँछ ।
त्यो छोड्नु हुँदैन, क’ण्डम प्रयोग गरे जसरी औषधि पनि यौ’न सम्बन्ध राख्दा मात्रै खानुहुँदैन । चिकित्सकले दिएको सुझावअनुसार खानुपर्छ । तर कतिले सुझावअनुसार गर्दैनन्, त्यसले पछि समस्या ल्याएर फेरि चिकित्सककहाँ जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
किशोरावस्थामा अनियमित हुने कारण
मेच्युरिटी नपुगेर पनि नहुने हुन्छ । ब्रेनदेखि ओभरीसम्मको कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम मेच्योर नहुञ्जेल महिनावारी नियमित हुँदैन । त्यसैले पहिलो पटक भएपछिको १/२ वर्ष अनियमित हुने वा महि’नावारी नै नहुने पनि हुन्छ । यो मेच्युरिटी नपुगेर हो ।
वयष्क उमेरमा अनियमित हुने कारण
ग’र्भसँग सम्बन्धित समस्याहरु जस्तै– ग’र्भपतन, सु’त्केरी हुने र शालबाट उत्पन्न हुने ट्यु’मरहरुका कारण हुन्छ । परिवार नि’योजनका साधनहरुको अनियमित प्रयोग तथा तिनिहरुको साइड इफे’क्टले पनि अनि’यमित हुन्छ ।
प्र’जनन् तथा यौन अं’गको संक्रमण वा प्र’जनन् अं’गमा हुने ट्यु’मर पलाउने जस्ता अवस्थाहरु र कतिपयको अनियमित गराउने कारणमा राम्रोसँग ह’र्मोनल औषधि राम्रोसँग सेवन नगरेको कारणले गर्दा पनि अनि’यमित हुन्छ ।
४० वर्ष उमेर नाघेका महिलामा
गर्भसँग सम्बन्धित कारणले
हर्मन असन्तुलन हुनाले
क्या’न्सर वा ट्यु’मर पलाउने अवस्थाका कारण
महिनावारी बन्द भइसकेपछि पनि अनियमित रगत जाने हुन्छ । त्यो महिनावारी होइन, त्यसलाई महिनावारी भन्दैनन् । योनीमार्गको सतहहरु पातलो भई सानो रक्तकोषिका फुटेर रगत जाने हुन्छ । मेडिकल भाषामा यसलाई भजाइनल एट्रोफि भनिन्छ । अर्को पा’ठेघरको भित्रको सतह पनि पातलो भई रगत जाने हुन्छ, यसलाई एट्रोफिक इन्डोमेट्राइटिस भनिन्छ । यसले पनि र’क्तश्रा’व हुन्छ । पा’ठेघर वा पाठेघरको मुखको क्या’न्सर वा प्रि क्या’न्सर हुँदा पनि रगत जान सक्छ ।
रक्तअल्पता वा एनिमिया हुने
व्यक्तिगत तथा सामाजिक अस्वस्थता
यौ’न जीवनमा समस्या
यौ’ना’ङ्ग क्या’न्सरको समस्या
यदि शल्यक्रि’या गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसपछिका समस्या झन् थपिँदै ज’टिलताहरु आउँछन् । समयमा नै उपचार नभए मृ’त्यु समेत हुन सक्छ ।
अनियमितता भएपछि सम्बन्धित विशेषज्ञसँग नै परिक्षण गराउने
समयमा नै र उचित रुपमा औषधि सेवन गर्ने
क्या’न्सर स्क्रिनिङ टेस्ट गर्ने
प्रिक्या’न्सर स्टेजमा नै रोग पत्ता लाग्दै उपचार गर्न सके क्यान्सर हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
रक्तअल्पतालाई कम गर्न नियमित रुपमा आइरन, फोलिक एसिडलगायतका भिटामिन तथा लवणहरु चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सेवन गर्नुपर्छ । भिटामिन तथा पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ ।
(परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका डा. बरालसँग यसिमा महतले गरेको कुराकानीमा आधारित)
कोभिडसँग हारेको जोडि, के भयोत तेस्तो?
गाईको गहुँतबाट क्यान्सर लगाएत १ सय ४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक निष्कर्ष
क्यान्सर, मुटु रोगकालागी अ’चुक औषधी हो बाँसको तामा, यस्ता छन् खाने तरिका
आँपको बोक्रालाई नठान्नुहोस् बेकार, चाउरी कम गर्नेदेखि डण्डीफोर हटाउन प्रयोग गर्ने तरिका सहित